Ammas Perezidaantiin biyya Aafrikaa biroo du'uun isaa hinoolu jedha TB Joshuwaan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Gaafa Afrikaa Ammas Perezidaantiin biyya Aafrikaa biroo du’uun isaa hinoolu jedha TB Joshuwaan
Ammas Perezidaantiin biyya Aafrikaa biroo du’uun isaa hinoolu jedha TB Joshuwaan
Lubni mana amantaa pheenxeqoosxee biyya Naayjeeriyaatti argamuu, ‘nabiyyii’ jechuun kan ufmuude TB Joshuwaan, ammas perezidaantota biyyoota Aafrikaa gama kibbaa keessaa tokko du’uun isaa akka hinoolle dubbate. Kana kan dubbate, ‘nabiyyii’ TB Joshuwaan, bataskaana isaa keessatti guyyaa dilbataa ummata kumaatamatti laakkawamu fundurattiifi ammas yeroo sagantaan kadhaannaa TV Amaanu’eel jedhamu irratti kallattiidhaan darbaa turetti.
Kana duras baatii Gurraandhal 2014 keessa perezidaantiin 2 nannoo gama kibba Aafrikaatti argamanii akka du’an raagee ture. Garuu perezidaantiin du’uuf deemu sun eennuun akka ta’e wanti kallattiidhaan maqaadhahe hinturre. Perezidaantii Zaambiyaa kan ture Maaykil Sataan dhiheenna kana du’uun boqatuun isaa kan beekamuudha. Du’a perezidaantii isaanii booda, lammiiwwan Zaambiyaa hedduun isaanii raagni TB Joshuwaa kan perezidaantii isaanii irratti qiyyeeffate ta’uu gara amanuutti deeman. Du’a perezidaantii Malaawii duras, perezidaantiin nannoo biyyoota Aafrikaa kibbaa akka du’uu jiru raagee ture-yeroo sanis maqaa wonti tuqe hinturre.
Maaykil Saataas ta’ee kanneen biroo, perezidaantonni Aafrikaa hedduun isaanii rakkoo umrii fi fayyaa akka qaban beekamaadha. Kanaaf, dubbichi waa’ee yoomiifi eennutu dura deemaati malee, hedduun isaanii yeroodheeraa akka hinturre beekamaadha. Kuni waan TB Joshuwaan qofti raaguu miti. Keesattuu hanga maqaa fi guyyaa lafa hinkennetti.
Maal irratti hundaayee TB Joshuwaan kana raage? Wonti beekamu tokko hinjiru. Wanti qajeelatti beekame garuu, TB Joshuwaan, dhufaatii kufaatii mana amantaa dhunfaa isa (Synagogue Church of All Nations) kan magaalaa Leegositti argamu funduratti arguus ykn raaguu hindandeenne. Jigiinsi mana amantaa sanii, Fulbaana dabre keessa du’aatii namoota 80 fi madaayiinsa namoota 131f sababa ta’uun niyaadatama. kanneen lubbuu isaanii dhaban keessaa 67 lammiiwwan Aafrikaa Kibbaa turan.
Previous articleRaajii samiifi ardii madaala kanaan ilaalaa
Next articleRukuttaan Al Shabaab Keenyaa keessatti lubuu nama 28 galaafate
Finfinneen weerara lafaa qindaaye jalatti kufte